Xog-Maxaa loo dilay Taliyihii Guusha Awdheegle? – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 Last updated Oct 19, 2019
HornAfrik-Waxaa faah faahin iyo xogo dheeraad ah laga helayaa dilka Taliyihii Guutada Gorgor ee Kumaandooska Soomaaliya Maxaadeey Saleebaan kaasi oo xalay lagu dilay is rasaaseyn ka dhacday agagaarka Ex Hotelka Naasahablood 2 ee ku dhow Xaawo Taako iyo baraha koontarool ee madaxtooyada laga ilaaliyo.
Dilka taliyaha waxa ageystay ilaalada Hoteelka Maa’ida ee ExNaasahablood 2 , waxaana taliyaha dilkiisa kahor ay ilaaladu dilen mid akmdi ah askarti la soctay,
Goob jooge ayaa HornAfrik u sheegay in ilaalada Hoteelka ay rasaaseeyeen gaariga uu taliyaha la socday xilli uu ka baxay dhanka madaxtooyada balse uu yara hakaday gaarigiisa meel Hoteelka u dhaw.
Wuxuu Taliye Maxaadeey kamid ah saraakiisha dalka dibadiisa wax ku soo bartay wuxuuna Taliye usoo noqday Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynayaashi hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif,
Sidoo kale Taliyahan ayaa hoggaaminayay howlgalkii Ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan Ciidamada kumaandooska lagu soo tababaray dalka Turkiga ee dhowaan la wareegay degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in xabsiga loo taxaabay askar ku sugneyd bar koontarool oo ku taala nawaaxiga Ex Baar Shabeelle, kaddib markii ay ku lug yeesheen fal lagu dilay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Xoogga dalka.
Taliye kuxigeenka Booliska Soomaaliyeed Jen. Zakiya Xuseen ayaa sheegtay in dhammaan ciidanka joogay barta koontarool la xiray, isla markaana Ciidanka Booliska ay wadaan baaritaanka falkaas.